Traaktaroonni 114 waldaalee intarpiraayizii 114f kennaman – Fana Broadcasting Corporate
Traaktaroonni 114 waldaalee intarpiraayizii 114f kennaman
Finfinnee, Onkololeessa 1, 2012 (FBC) – Traaktaroonni 114 waldaalee intarpiraayizii 114f kennaman.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti waldaalee intarpiraayiziin gurmaa’an 114f tiraaktaroonni qonnaa 114 har’a bakka itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan argamanitti kennamaniiru.
Obbo Shimallis sochiin gama diinagdeetin mul’achaa jiru abdachiisaa ta’uu dubbataniiru.
Oromoon wal tuffii keessaa ba’uun, wal kabajaa fi wal jaalalaan hojjachuu qabas jedhaniiru.
Falaasama haaraa qabachuudhan immaammataa fi tarsiimoo ammayyaa’adhaan hojjachuun murteessadhas jedhaniiru.
Qonnaan bulaan gara makaaniizimiitti ce’uuf hajjatamaa jiraachuu himuun, gara fuula duraatti Birrii biiliyoona 4.5 maddeen gara garaarraa walitti qabuun meeshaaleen oomisha qonnaa gara biyyaatti galchuuf hojjatamaa jiraachuu himan.
Oromiyaa misoomsuun mataa ummata keenyaa ol qaba waan ta’eef, cimnee ni hojjenna jedhaniiru itti aanaan preezdaantichaa.
Obbo Shimallis Warshaa Meeshaalee Qonnaa Keenyaa daawwataniiru.
Tiraaktatoonni kunniin qaama waarraaqsa diinagdee Oromoo kan ta’e Warshaa Meeshaalee Qonnaa Keenyaa ( Keenyaa Agricultural Equipment Manufacturing PLC) magaalaa Shaashamanneetti argamuun kan walitti tolfamanidha.
Warshaan kun bara kana tiraaktaroota 2000 ol walitti tolchuuf karoorfatee hojjetaa jira.
Jilli itti aanaa preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatin duurfamu hojiilee misoomaa godina Arsii Lixaa daawwate.
Jilichi qonna garbuu biiraa dargaggoonni kanaan dura hojii hin qabne, waldaadhan gurmaa’anii kilaastaraan oomishan daawwateera.
Dargaggonni 500 ta’an lafa heektaara 83 ta’u paakeejii guutudhaan qotaa jiru.
Mootummaan teeknolojii qonnaa bal’inaan dhiyeessuun oomishtummaa guddisuuf xiyyeeffaannaan hojjachaa jiraachuu obbo Shimallis ibsaniiru.
Qonna baadiyyaarratti carraa hojii bal’aa uumuuf mootummaan hojjechaa jiraachuu sadarkaa itti aanaa preezidaantiitti qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa Dooktar Girmaa Amanteen himaniiru.
Shawaa Kaabaatti laftii hin misoomin heektaarri 571 abbootii qabeenyaarraa fuudhame
Deeggartoonni misoomaa Ityoophiyaaf deeggarsa Doolaara…
Gareen Aadaa Ityoophiyaa gara Eertiraa imaluuf jedha